कोहलीको महाभारत- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
असार २१, २०७६ राम लोहनी
महाभारत’ को मोटामोटी कथा धेरैलाई थाहा छ  । तीमध्ये कतिपयलाई कथाको बृहत् रूप पनि जानकारी छ  ।
अझ कतिपयलाई कथाका कुनाकाप्ची, आरोह, अवरोहको ज्ञान मात्र होइन, त्यसको विवेचनामा पनि विज्ञता छ । सर्वसाधारणका लागि महाभारत कथा सरल छैन, मिथ र अलंकारको गुत्थी सजिलै खुल्दैनन्, दार्शनिक रूपले दुरूह छ, पात्र धेरै छन्, घटनाहरू जेलिएका छन्, कथाहरू गाँसिएका छन् । सबभन्दा ठूलो समस्या, कथा र उपकथाभित्र प्रशस्त ‘ग्याप’ छन् । कथा जोड्ने सेतु अनगिन्ती ठाउँमा भत्केका छन् ।
महाभारत अध्ययन गर्ने एउटा प्रवृत्तिले यसलाई साहित्यिक ग्रन्थ मानेर कथाको विश्लेषण, पात्रहरूको चरित्र चित्रण गर्ने प्रयास गर्छ । त्यस्तै, महाभारतलाई तत्कालीन समाजको प्रतिविम्ब ठानेर हेर्ने ऐतिहासिक दृष्टि पनि बलशाली छ । महाभारतले समाजको ठूलो हिस्सामाझ धार्मिक ग्रन्थको हैसियत प्राप्त गरिसकेको छ । घटना र पात्रहरूमाथि प्रश्न उठाउनेभन्दा पनि तिनलाई जस्ताको तस्तै विश्वास गर्नुलाई आफ्नो कर्तव्य ठान्ने जमात हो यो । महाभारतलाई उपजीव्य ग्रन्थ मानेर यसका उपकथा र खास पात्र वा घटनालाई विस्तार गरेर नयाँ साहित्यिक रचना तयार गर्ने साहित्यकारहरू पनि प्रशस्तै छन् । पछिल्लो समय, महाभारतजस्ता ग्रन्थमा आधारित रहेर काव्य, नाटक वा आख्यान तयार पार्दा कथालाई सन्दर्भ प्रदान गर्ने र समसामयिक पाठकको चेतनास्तरलाई सुहाउने गरी नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति स्थापित हुँदै गएको छ । आधुनिक पाठकहरू कथाको सरल प्रवाहलाई अवरुद्ध पार्ने घटना र दैवी तथा चामत्कारिक मिथलाई यथारूपमा कथाको अंग मान्न तयार छैनन् । उनीहरूको चासो मूलकथामा रहेका छिद्रता र दुरूह मिथहरूलाई लेखकले कसरी सम्बोधन गरेका छन् भन्नेमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । उदाहरणका लागि भीष्मले आजीवन ब्रह्मचर्यमा रहने संकल्प गर्दा भीष्मको मनमा के कस्तो तर्क वितर्क चलेको थियो भनेर महाभारतको कथाले भन्दैन, यो पाठकको कल्पनामै भर पर्छ । कर्णको पितृत्वको निराकरण पनि रहस्यकै विषय हो । कवच, कुण्डलसहित जन्मनु के प्राकृतिक हुन सक्छ ? द्रौपदीको चीरहरणमा कृष्णको उपस्थितिलाई कुन कोणले व्याख्या गर्दा आजका पाठक र श्रोताले सजिलै पत्याउँछ ? उही कथाको पुनर्कथन त जसले पनि गर्न सक्ला । तर यस्ता ‘अप्ठ्यारा’ खड्प्वाललाई भरेर कथालाई पुनर्जिवित गर्नु सजिलो कुरा होइन । कतिपय लेखकहरू सर्वसाधारणको विश्वास र आस्थाको सम्मान गर्ने नाममा यस्ता मिथहरूलाई विमथकीकरण गर्ने आँट गरिहाल्दैनन् पनि !
नरेन्द्र कोहलीद्वारा लिखित कुल चार हजार पृष्ठभन्दा बढीको महासमर (१–९) शृंखला यही परम्पराको एउटा चुनौतीपूर्ण प्रयास हो । कोहलीले महाभारतका मुख्य मुख्य पात्रमाथि छुट्टाछुट्टै आख्यान पनि लेखेका छन् । यो शृंखलाचाहिँ महाभारतको मुख्य कथाको आख्यानीकृत स्वरूप हो । सामान्यतया महाभारत कथा भन्नेबित्तिकै कौरव (धृतराष्ट्र पुत्र) र पाण्डव (पाण्डुपुत्र) बीच हस्तिनापुर राज्यको उत्तराधिकारलाई लिएर भएको द्वन्द्वको सम्झना हुन्छ । बीसौँ शताब्दीको विश्वयुद्धलाई छोडेर महाभारतमा चर्चा गरिएबमोजिमको व्यापक नरसंहार भएको र त्यति धेरै संख्यामा राज्यहरू सहभागी भएको यस्तो बृहत् युद्ध इतिहासमा भएको रेकर्ड पनि छैन । महाभारतजस्ता कथामाथिको आख्यान पढ्दा पाठकलाई पैदा हुने जिज्ञासा अन्य आख्यान पढ्दाको भन्दा फरक हुन्छ । कथाबारे पाठक पहिल्यै जानकार हुनु नै लेखकहरूलाई पहिलो चुनौती हो । यस्ता नवआख्यानहरूप्रति पाठकको मुख्य चासो लेखकको शैली र कथाको पुनर्निर्माणप्रति नै रहन्छ । उदाहरणको लागि राजेश्वर देवकोटाद्वारा लिखित ‘द्वन्द्वको अवसान’ लाई लिन सकिन्छ । महाभारत कथाको एकसरो कथासँग जानकार पाठकले कर्णमा एक प्रकारको खलनायकत्व नै देखेको हुन्छ । तर देवकोटाकृत यो सानो उपन्यासले कर्णप्रतिको दृष्टिकोण नै परिवर्तन गरिदिन सक्छ । त्यस्तै प्रतिभा रायले द्रौपदीमाथि लेखेको आख्यान ‘याज्ञसेनी’ (नेपालीमा ‘द्रौपदी’ शीर्षकमा अनूदित) र चित्रा बनर्जी दिवकरुनीको ‘प्यालेस अफ इल्युजन’ मा द्रौपदीको कर्णप्रतिको अनुराग महाभारतको मूलकथा मात्र पढ्ने पाठकको लागि पूर्णतः अपरिचित दृष्टिकोण हो । दुर्योधनप्रति आम महाभारत पाठकको दृष्टि सकारात्मक भएको पाइँदैन । तर आनन्द नीलकण्ठनले दुई भागमा लेखेको ‘अजय’ (रोल अफ द डायस र राइज अफ कली) मा दुर्योधनको नायकत्व र युधिष्ठिर आदिको खलनायकत्वलाई पढ्दा त्यो पनि महाभारतको वैकल्पिक पठन हो भन्न पाठक बाध्य हुन्छ । शिवाजी सावंतको ‘मृत्युञ्जय’ मा कर्णलाई कृष्णसँग गरिएको तुलना पनि महाभारतको एकांगी पाठकको लागि नयाँ दृष्टिकोण हो । उसो त, महाभारतजस्ता विशाल ग्रन्थको अंशलाई लिएर छुट्टै कृति लेख्‍ने परम्परा नयाँ भने होइन । कोहलीको ‘महासमर’ लाई यही परम्पराको एउटा महत्त्वाकांक्षी कडीको रूपमा लिनुपर्छ ।
कोहलीले महाभारतको कथालाई भीष्मबाट सुरु गरेर भीष्ममै अन्त गरेका छन् । कौरव–पाण्डव द्वन्द्वको बीजापरोण गंगापुत्र देवव्रतले राज्यको उत्तराधिकारबाट आफूलाई अलग्ग राख्‍ने घोषणा गरेसँगै भएको विश्वास गरिन्छ । कोहलीले पनि यो घटनालाई महाभारतको उठानको रूपमा लिएका छन् । पिता शान्तनुलाई सत्यवतीसँग विवाह गराइदिएर देवव्रतले आजीवन ब्रह्मचर्यमा रहने प्रतिज्ञा गरेर उत्तराधिकारबाट पन्छिएका हुन् । आजीवन ब्रह्चर्यमा रहने र शासकीय इच्छाबाट पूर्ण रूपले तिरोहित रहने संकल्पसँगै देवव्रतलाई भीष्म भन्न थालिएको हो । तर शान्तनुले भीष्मसँग हस्तिनापुरको संरक्षण गर्ने वचन लिए । पाण्डुको मृत्युपछि सत्यवती पनि भीष्मलाई हस्तिनापुर सुम्पिएर व्याससँग वनवासी भइन् । शान्तनु र सत्यवतीको आग्रहबाट भीष्म हस्तिनापुरको संरक्षण गर्ने र योग्य व्यक्तिले राज्य नसम्हाल्दासम्म मुलुकको संरक्षक बन्नुपर्ने बन्धनमा बाँधिए । महासमर शृंखलाको पहिलो खण्ड ‘बन्धन’ को कथावस्तु यही हो । आठौँ खण्ड हो ‘निर्बन्ध’, अर्थात बन्धनमुक्ति । युद्धसँगै धृतराष्ट्रपुत्रहरूको अवसान हुन्छ र युधिष्ठिरको राज्याभिषेक हुन्छ । कृष्णका अनुसार हस्तिनापुरले युधिष्ठिरजस्तो योग्य शासक पाएकोले भीष्म बन्धनबाट मुक्त । भीष्म कर्तव्यबाट बाँधिनुलाई धर्म ठान्थे । कृष्णचाहिँ भीष्मले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेकाले बन्धनमुक्त भएको ठान्थे ।
दोस्रो खण्ड ‘अधिकार’ हस्तिनापुरको वास्तविक उत्तराधिकारी को हो भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । विचित्रवीर्यको जेठा छोराको हैसियतले धृतराष्ट्र गद्दीको उत्तराधिकारी हुनुपर्ने हो । तर यिनी जन्मान्ध भएकाले अर्का पुत्र पाण्डु राजा तुल्याइए । तर पाण्डु राज्य त्यागेर वनमा लागेपछि भने धृतराष्ट्रलाई नै राजा तुल्याइयो । युवराजाधिराज घोषित गर्नुपर्ने समयमा हस्तिनापुरको वास्तविक राजा को हो त भन्ने जटिल अवस्था पैदा भयो । धृतराष्ट्र अयोग्य थिए भने पछि किन राजा बनाइए ? पछि राजा बनाउन मिल्थ्यो भने पहिल्यै किन बनाइएन ? गद्दीनसीन राजाका छोरा र दिवंगत राजाका छोरामा उत्तराधिकारीको अधिकार कसको रहन्छ ? यो परिस्थितिबाट गुज्रिएका धृतराष्ट्र र गान्धारीको महत्त्वाकांक्षालाई कोहलीले बडो सुन्दर ढंगबाट केलाएका छन् । उनीहरू आफूलाई हस्तिनापुरको वैधानिक उत्तराधिकारी ठान्छन् र आफूहरूलाई अन्याय भए पनि आफ्ना छोरा दुर्योधनचाहिँ सजिलै राजा बनोस् भन्ने चाहन्छन् । धृतराष्ट्र गद्दीमा बसे पनि मुकुट त पाण्डुकै हो भन्ने तर्क पनि त्यत्तिकै बलियो देखिन्छ । यही मौकामा जन्मले पनि जेठा युधिष्ठिर हस्तिनापुर आएपछि दुर्योधनमा पाण्डुपुत्रहरूप्रति द्वेष पैदा हुन्छ । कथामा कोहलीले युधिष्ठिरको आनृशंसता, धर्मभीरू स्वभाव र शास्त्रज्ञानको उच्च प्रशंसा गराएका छन् भने दुर्योधनको खलनाकत्वको त्यही दाँजोमा तिरस्कार पनि । द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धाको माझ युधिष्ठिर युवराज घोषित भएको घटनासँगै दोस्रो खण्ड समाप्त हुन्छ ।
युवराज घोषित भैसकेपछि पनि युधिष्ठिर र उनका भाइहरूको हस्तिनापुर बसाइ सहज हुन सकेन । दुर्योधन, शकुनि र कर्णको षड्यन्त्रको तानाबानामा उनीहरू फसिरहनुप‍र्‍यो । पृष्ठभूमिमा धृतराष्ट्रको सहयोग त छँदै थियो । कोहली यसलाई उनीहरूको कर्मको खेलको रूपमा चर्चा गर्छन् तेस्रो खण्ड ‘कर्म’ मा । षड्यन्त्रको अंगस्वरूप पाण्डवहरूलाई वारणावतमा जलाएर मार्ने योजना बन्यो । त्यसबाट बचेर निस्केका पाण्डवहरूले द्रौपदीलाई पत्‍नीको रूपमा प्राप्त गरेर हस्तिनापुर फर्केपछि राज्य विभाजन भएको सम्मका घटनाहरूलाई यो खण्डले समेटेको छ । विभाजनबाट पाण्डवहरूलाई खाण्डववनको दुर्गम र जंगली क्षेत्र प्राप्त भयो । युधिष्ठिर त्यसलाई कृतज्ञतापूर्वक स्विकार्छन् र कृष्णको सहायताले इन्द्रप्रस्थ राज्य स्थापना पनि गर्छन् । युधिष्ठिरको यो राज्य धर्मशास्त्रको नियमअनुसार चलेको अनुपम राज्य बन्न पुग्छ । चौथो खण्ड ‘धर्म’ मा युधिष्ठिर र पाण्डवले निर्वाह गरेको धर्मको व्यापकता भेटिन्छ । कृष्ण युधिष्ठिर र इन्द्रप्रस्थ मार्फत पृथ्वीमा धर्मराज्य स्थापना गर्ने उद्योगमा प्रवृत्त हुन्छन् । जरासन्ध र शिशुपालजस्ता बलिया राजाहरूको वध तथा युधिष्ठिरको राजसूय यज्ञ धर्मराज्य स्थापनाका प्रारम्भिक घटना हुन् । तर सम्पूर्ण पृथ्वीमा धर्म स्थापना हुनुअघि दुर्योधनसहित कौरवको नष्ट हुनु अनिवार्य थियो । त्यसका लागि दुर्योधनको पापको घडा अझै भरिएको थिएन । द्वेष र कपटबाट निर्देशित दुर्योधन नेतृत्वको हस्तिनापुरले पाण्डवको राज्य मात्र अपहरण गरेन, उनीहरूलाई १३ वर्षको निर्वासनको लागि पनि बाध्य पार्‍यो । शकुनिको कपटपूर्ण जुवा, द्रौपदी चीरहरणसहितका घटनाहरूलाई कोहलीले यही चौथो खण्डमा समावेश गरेका छन् ।
निर्वासनअन्तर्गत धृतराष्ट्रले पाण्डवलाई १२ वर्षको वनबास र १ वर्षको गुप्तबासको सजाय दिएका थिए । पाचौँ खण्ड ‘अन्तराल’ पाण्डवहरूको वनबासको कथा हो । द्वैतवन र काम्यक वनमा पाण्डवहरूको दिनचर्या, शस्त्रास्त्र संकलनका लागि अर्जुनको हिमालय यात्रा पाचौँ खण्डमा परेका मुख्य विषय हुन् । यता दुर्योधनको उद्योग भने पाण्डवहरूको कष्ट र पीडालाई बढाउनुमै थियो । कर्ण र शकुनि यो उद्योगका प्रमुख सल्लाहकार थिए । जलविहारको नाममा आफ्नो वैभव देखाउने, दुर्वासा ऋषि मार्फत दुःख दिने, जयद्रथलाई द्रौपदी हरण गर्न प्रेरित गर्ने आदि कार्य दुर्योधनको नेतृत्वमा भए । यी वृत्तान्तसहित मत्स्यदेश विराटनगरमा पाण्डवहरूको गुप्तवासलाई छैटौं खण्ड ‘प्रच्छन्न’ ले चर्चा गरेको छ । ‘प्रच्छन्न’ लाई कोहलीले एक प्रकारको गुप्तयुद्धको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । पाण्डवहरू अज्ञात बासमा पनि ऊर्जा संकलित गर्दै रहन्छन् भने कुन्ती हस्तिनापुरमै ‘तपस्यारत’ छिन् । कहिल्यै छोराहरूबाट अलग नबसेकी कुन्ती यो १३ वर्ष हस्तिनापुरमै बसिन् । कुन्ती हस्तिनापुरमा आफ्नो उपस्थितिलाई धृतराष्ट्र र धार्तराष्ट्रहरूको अनधिकार चेष्टामाथिको मौन धावाको रूपमा मान्छिन् । यो उनको प्रच्छन्न तपस्या थियो ।
सफलतापूर्वक गुप्तबास पूरा गरिसकेपछि पनि पाण्डवहरूले इन्द्रप्रस्थ फिर्ता पाएनन् । अन्ततः युद्ध अनिवार्य भयो । सातौँ खण्ड ‘प्रत्यक्ष’ मा युद्धको उद्योग र युद्धको पहिलो दस दिन अर्थात् भीष्म पर्वको वर्णन छ । युद्ध रोक्‍न र युद्धमा पाण्डवलाई विजयी बनाउन कृष्णको प्रच्छन्न भूमिका यो खण्डको आकर्षक पक्ष हो । कृष्णले अर्जुनलाई युद्ध मैदानमा दिएको उपदेश गीताको चर्चा पनि यसै खण्डमा छ । पारिवारिक विवादले उग्ररूप लिएर हुन लागेको महासंग्राममा राजाहरू कसरी पक्ष–विपक्षमा विभाजन भए, शस्त्रास्त्र तथा सेना संकलनको होडबाजी कस्तो रह्यो, युद्ध हाँक्‍ने महारथीहरूको मनोभाव कस्तो रह्यो आदि कुरालाई कोहलीले मिहीन रूपले केलाउने प्रयास गरेका छन् । युद्धको उत्तरार्द्ध अर्थात् दोस्रो आठ दिन र युधिष्ठिरको राज्याभिषेकसम्मको वर्णन आठौँ खण्ड ‘निर्बन्ध’ को अंश बनेको छ । दसौँ दिनमा भीष्म ढलेपछि क्रमशः द्रोणाचार्य, कर्ण र शल्यको सेनापतित्वमा युद्ध भयो । दुर्योधन र भीमको गदायुद्ध तथा अश्वत्थामाले सुतिरहेका द्रौपदीपुत्र, धृष्टद्युम्‍न, शिखण्डीसमेतको हत्या गरिदिएपछि महाभारत युद्धमैदानमा उत्रिएकामध्ये केवल दस जना मात्र बचेको त्रासदीलाई कोहलीले कलात्मक रूपले प्रस्तुत गरेका छन् ।
शृंखलाको नवौँ खण्ड ‘आनुषंगिक’ कथाको अंश नभएर कथाको पृष्ठभूमि हो । यसमा कोहलीले महाभारतप्रति आफ्नो आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् । महाभारत कथालाई लेखकले कसरी लिएका रहेछन्, महाभारतको कुन कुरालाई लेखकले स्विकारेका रहेछन्, कुन कुराप्रति लेखकको संशय रहेछ, कुन कुरा चाहेर पनि पुनर्व्याख्या गर्न सकेनन् आदि प्रसंग यो खण्डमा छन् । वास्तवमा महाभारत कथाको पुनर्कथन एउटा ठूलो चुनौती हो । यो चुनौतीलाई कोहलीले कसरी पार लगाएका रहेछन् भन्ने जिज्ञासाको समाधान शृंखलाको सबै भाग आद्योपान्त पढेपछि मात्र हुन्छ । कथाको अंगको रूपमा राख्‍न नसकेका प्रसंगहरूको तर्कसंगत चर्चाले नवौँ खण्ड अतिरिक्त रूपले आकर्षक बनेको छ । आख्यान नभएर विवेचना भएकाले अघिल्ला खण्डहरू पढ्न नचाहनेहरूका लागि पनि उपयुक्त पठन हुन सक्छ नवौँ खण्ड । जस्तो कि, कर्णलाई व्यासले महाभारतमा र कोहलीले आफ्नो आख्यानमा सूर्यपुत्र नै बताएका छन् । यो खण्डमा आएर कोहली कर्ण वास्तवमा दुर्वासाकै पुत्र हुन सक्‍नेतर्फ संकेत गर्छन् । कथाभित्र जस्ताको तस्तै अपनाइएका मिथहरूलाई पनि वैकल्पिक विवेचना गर्नुपर्नेतर्फ कोहलीको अभिमत देखिन्छ ।
महाभारत कथाको रचनाकार भनेर वेदव्यासलाई मानिन्छ । महाभारत कथा व्यासले पहिले आफ्ना चार शिष्यलाई सुनाएका थिए । तिनै चार शिष्यमध्ये एक वैषम्पायनले अर्जुनको पनाति जन्मेजयलाई सुनाएपछि महाभारत सार्वजनिक भएको हो । जन्मेजय आफ्ना पुर्खाबारे ज्ञानशून्य थिए । त्यही कथा व्यासका अर्का शिष्य रोमहर्षणका पुत्र उग्रश्रवाले नैमिषारण्यका शौनकादि ऋषिहरूलाई सुनाएका थिए । यसरी महाभारतको कथाको विभिन्न संस्करण भएको तर्फ स्वयम् महाभारतले स्विकारेको छ । वैषम्पायन र उग्रश्रवाले सुनाएका महाभारतमा फरक थियो भन्ने प्रस्ट छ । जय र भारत हुँदै महाभारतको स्वरूप तयार भएको तथ्य स्वयम् महाभारतमै उल्लेख छ । यसकारण महाभारतलाई अन्तिम रूप दिने ‘व्यास’ र महाभारतको पहिलो लेखक ‘व्यास’ एकै व्यक्ति होइनन् भन्ने लगभग प्रस्ट भैसकेको छ । बीचमा कस कसले के–के अंश थपघट गरे भन्ने अनुसन्धानको विषय हो । वेदव्यासका अरू तीन शीष्यका पनि आआफ्ना महाभारत संस्करण रहेको बताइन्छ । तर जैमिनीको ‘जैमिनी महाभारत’ को सानो अंशबाहेक अरू संस्करणहरू भने प्राप्त हुन सकेका छैनन् ।
महाभारतजस्तो स्थापित कथामाथि आख्यान तयार गर्दा लेखक निश्चित आग्रहले प्रेरित हुने सम्भावना रहिरहन्छ । कथाका उत्कर्ष र घुम्तीहरू पहिल्यै निर्धारित भइसकेकाले पात्रका मनोदशाको वर्णनमा पछिल्ला घटनाको पश्चदर्शी प्रभाव पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । ‘महासमर शृंखला’ पढ्दै गर्दा कोहली पनि यस्ता समस्याको चपेटाबाट मुक्त भएको भान हुँदैन । समकालीन मनोविज्ञानद्वारा त्यो समाजका पात्रहरूको मनोदशालाई विश्लेषण गर्ने प्रयास पुनर्कथनको अर्को समस्या हो । सत्यवतीमा सौतेनी द्वेषको उत्कर्ष देखिनु समकालीन समाजको प्रतिविम्ब हो कि त्यो समाजको चित्रण हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । पाण्डुपत्‍नीद्वय माद्री र कुन्तीमा पनि प्रच्छन्न रूपले सौतेनी आग्रह देखाइएको छ । द्रौपदीमा पनि सौतेनी द्वेषको झिल्का देखिन्छ । सौताको अवधारणा त्यो समाजमा कस्तो थियो भन्ने प्रश्नलाई लेखकको आग्रहले छायामा पारिदिएको त होइन ? सत्यवतीले व्यासको जन्म र कुन्तीले कर्णको जन्मलाई किन गोप्य राख्‍नुपरेको ? सत्यवतीले पराशरसँग सम्बन्ध राखेको घटनालाई सत्यवतीकी आमा छोरीको शत्रुवत् व्यवहार बताउँछिन् । सत्यवतीले पराशरसँग सम्बन्ध राख्‍नुपर्नाको के बाध्यता के थियो भन्ने कुरालाई रहस्यको अस्पष्ट पर्दाभित्रै राखिदिएका छन् लेखकले ।
केवटहरूको समाजमा कौमार्यलाई ज्यादै महत्त्व दिइन्थ्यो भन्ने अड्कल लेखकको देखिन्छ । जबकि कृष्णले कर्णसँगको संवादमा कानिन पुत्र (विवाहअघि जन्मेको सन्तान)को वैधानिकताको वकालत गरेका छन्, कुन्तीले पनि कर्णलाई ज्येष्ठ पाण्डव हुन पाउने लोभ देखाएकी थिइन् ! सत्यवतीले आफूबाट जन्मेको सन्तानलाई उत्तराधिकारी बनाउने हठ गरेको कुरालाई लेखकले सत्यवतीको क्रूरताको स्तरसम्म पु‍र्‍याएका छन् । विश्वामित्रले मेनकाबाट जन्मिएकी शकुन्तलालाई त्यागेको घटनालाई उल्लेख गरिएको छ । तर पराशरले व्यासलाई अपनाएको घटना र विश्वामित्रले शकुन्तलालाई त्यागेको घटना छोरा र छोरीप्रतिको विभेद हो नभनेर लेखकले मेनकालाई दोषी करार गर्न खोजेको भान हुन्छ ।
लेखकले ‘महासमर’ शब्दलाई दोहोरो अर्थमा प्रयोग गरेका छन् । पहिलो अर्थ द्वन्द्वयुद्ध हो, जसमा पक्ष विपक्षमा जम्मा भएका सैन्य समूहबीच स्पर्धा र विजयको उद्देश्य हुन्छ । सामान्य समरमा युद्धरत समूह पनि सानो हुन्छ । तर महासमरमा सबै राजा, सबै शासक, सबै सेना एक वा अर्को कारणले बाध्य भएर पक्ष विपक्षमा उभिनुपरेको हुन्छ । अर्को महासमर व्यक्तिभित्रको आधिभौतिक युद्ध हो । यसमा व्यक्ति आफ्नो अस्तित्वका लागि आफूबाहेक संसारका प्रत्येक जीवसँग युद्धरत हुन्छ (खण्ड ४, पृ.४५०(४५१) । व्यक्तिले आफूभित्रको महासमर समाप्त नगरेसम्म बाह्य संसारको समरमा सहभागी हुन सक्दैन भन्दै कोहली महाभारतको निचोड प्रस्तुत गर्न पुग्छन् ।
महाभारतको कथालाई सूक्ष्म रूपले केलाएर हेर्दा यसले वंश भनेर रगतको नातालाई मात्र स्विकारेको छैन । पितृसत्ताले प्रजननमाथि आफ्नो अधिकार स्थापना गरेको तथ्य छर्लंग देखिन्छ । सत्यवतीले विचित्रवीर्यका पत्‍नीहरूमा गर्भाधानका लागि आफ्नै छोरा व्यासलाई गुहारिन् । तर पाण्डुपुत्रसम्म आइपुग्दा सत्यवतीको रगत वंशमा प्रसारण भएन । शान्तनुको रगत त अघिल्लै पुस्ताबाट रोकिइसकेको थियो । महाभारतका केही पात्रहरूको आयु असाधारण देखिन्छ । कोहलीले यो पाटोलाई यथारूपमा स्विकारेका छन् । उमेरको यो समस्याले लेखक केही ठाउँमा अलमलिएका पनि छन् ।
महाभारतभित्र कथाहरूको प्रवाह र संगतिमा प्रशस्त समस्या छ । कोहलीले कतिपय छिद्रहरूलाई टाल्न खोजेका छन् भने कतिपयलाई जस्ताको तस्तै स्विकारेका छन्, मूल कथामा भएका अन्तरविरोधलाई छिचोल्ने प्रयास पनि गरेका छैनन् । नवौँ खण्डमा उल्लेख गरिएका स्वीकारोक्तिको सापेक्षमा हेर्दा लेखक कथाभित्र स्वच्छन्द रूपले सक्रिय हुन नखोजेको हो कि भन्ने भान पर्छ । महाभारतका पात्रमाथिका लेखकका छुट्टाछुट्टै प्रकाशित कृति र प्रस्तुत शृंखलाका अंशहरू हुबहु दोहोरिएका छन् । फुटकर कृति पढिसकेका पाठकलाई यो शृंखला पढ्दा ती ठाउँमा झर्को लाग्‍न सक्छ । तथापि महाभारतजस्तो भयंकर कथा र तिनका पात्रलाई सुहाउँदो परिवेश खडा गरेर सरलतम ढंगबाट प्रस्तुत गर्नु असाधारण लेखनीको परिणाम हो भन्नेमा चाहिँ कुनै द्विविधा छैन । लेखकले परिवेश र संवादलाई आकर्षक ढंगले पुनर्निर्माण गरेका छन् । व्यावहारिक जीवनका कटु सत्यलाई सुन्दरतम ढंगबाट उजागर गरिएका प्रशस्त दृष्टान्त भेटिन्छन् । महाभारतको पुनर्कथन अन्य ग्रन्थहरूको सहयोगबिना एक्लो महाभारतबाट मात्र सम्भव हुने कुरा होइन । यस अर्थमा प्रस्तुत ‘महासमर’ शृंखलालाई नरेन्द्र कोहलीको असाधारण सिर्जना भनेर स्विकार्नु अत्युक्ति हुँदैन ।
प्रकाशित : असार २१, २०७६ १०:२८
महिलाको विश्वकप फुटबलको फाइनल आइतबार फ्रान्सेली सहर लियोनमा हुँदै छ । र, यतिबेला फुटबलमा लैंगिक समानताको पक्षमा चर्को अवाज उठिरहेको छ ।
असार २१, २०७६ राजु घिसिङ
डिफेन्डिङ च्याम्पियन अमेरिका र नेदरल्यान्ड्स महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा आइतबार प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्  । विजेताले ट्रफीसँगै ४० लाख अमेरिकी डलर हात पार्नेछ, जुन सन् २०१५ मा अमेरिकाले प्राप्त गरेको पुरस्कारभन्दा दोब्बर हो  ।
यो पुरस्कार पुरुष फुटबलको विश्वकपसँग तुलना गर्ने हो भने अत्यन्तै न्यून हुन्छ । विश्वकप २०१८ को च्याम्पियन फ्रान्सले ३ करोड ८० लाख डलर हात पारेको थियो ।
दुवै विश्वकप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले आयोजना गर्छ । तर, यसपालि महिला विश्वकप सुरु हुनुपूर्व नै पुरुष र महिला फुटबलमा रहेको असमान पुरस्कार र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा तलबको ठूलो भिन्नतालाई लिएर बहस चर्किरहेको छ । फ्रान्समा ७ जुनमा २४ देश सहभागी महिला विश्वकपको आठौं संस्करण सुरु भएको थियो र सेमिफाइनल सकिँदासम्म पनि लैंगिक असमानतालाई लिएर बहस उस्तै चर्किरहेको छ । पुरस्कारमा रहेको भिन्न्ता हेर्दा लाग्छ, महिलाले खेल्ने फुटबल र पुरुषले खेल्ने फुटबल फरक हो । खेल नै फरकजस्तो । त्यसैले लैंगिक समानताको आवाज फुटबलमा पनि नउठोस् पनि कसरी ?
फिफाले यसपालि महिला विश्वकपमा जम्मा ३ करोड छुट्याएको छ, जुन चार वर्षअघिभन्दा दोब्बर हो । उसले रुसमा गत वर्ष भएको पुरुष फुटबलको विश्वकपमा पुरस्कार मात्रै ४० करोड डलर दिएको थियो । फिफाले विश्वकपको तयारीमा टिमलाई दिने तयारी खर्चलाई हेरौं, पुरुष टिमलाई ४ करोड ८० लाख र महिलालाई १ करोड १५ लाख डलर । लगानीमा यति ठूलो अन्तर छ भने हामी कसरी पुरुष र महिला टिमबाट मैदानमा समान स्तरको खेल अपेक्षा गर्न सक्छौं । केही वर्षयता महिला फुटबलको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको छ । महिला फुटबलको क्लबको प्रतियोगितामा पनि ६० हजारसम्म दर्शकले रंगशालामा प्रत्यक्ष खेल हेर्ने भएका छन् । तर, फिफाको पुरस्कार र लगानीको ठूलो खाडल रहेसम्म महिला खेलाडीबाट पुरुष टिम समानको खेलस्तर आशा गर्नु मूर्खता नै हुनेछ ।
अहिले फ्रान्समा भइरहेको महिला विश्वकपको आठौं संस्करण हो । यसको उपाधि सन् १९९५ मा नर्वेले जितेको थियो । उसले दुईपल्ट युरोपियन च्याम्पियनसिप पनि जित्यो । तर, फिफा बेलन डिअर २०१८ (महिला) को विजेता एडा हेजहेजरबर्गले यो विश्वकप नै बहिष्कार गरिन् । उनले नर्वेजियन फुटबल महासंघले महिला टिम र खेलाडीप्रति गरेको व्यवहार र लगानीलाई लिएर विरोध गर्दै उनले विश्वकप नखेल्ने घोषणा गरेकी थिइन् । समानताका लागि लड्दा नारीवादी भनिएको भन्दै उनले गुनासो गरेका छन् ।अमेरिकी म्यागजिन ‘फोर्ब्स’ ले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको एउटा तथ्यांकले पनि फुटबलमा महिला र पुरुष खेलाडीबीच रहेको तलबको असमानतालाई प्रस्ट पार्छ । ब्राजिली स्टार खेलाडी नेयमरले क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) बाट वार्षिक ४ करोड ३८ लाख डलर लिन्छन् । महिला फुटबलमा फ्रान्स, जर्मनी, स्विडेन, इंग्ल्यान्ड, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र मेक्सिकोको लिगलाई विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ । ती सात लिगका सबै महिला खेलाडीको तलब जोडे पनि नेयमरको भन्दा कम हुन्छ । लैंगिक समानताका लागि अचेल अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायतलगायत चर्को आवाज उठाइरहेको छ, करोडौं लगानी पनि गरिरहेको छ । यी देशमा पनि महिला र पुरुष फुटबललाई तुलना गरेर हेरौं ।
अस्ट्रेलियाका पूर्वस्टार टिम काहिलले मेलबर्न सिटीबाट २०१६–१७ मा खेल्दा ३५ लाख अस्ट्रेलियन डलर तलब पाएका थिए, जुन त्यहाँ त्यो सिजन महिला लिगमा सहभागी १ सय ८१ खेलाडीको भन्दा बढी हो ।अमेरिकाको पुरुष फुटबल टिम विश्वकपमा क्वाटरफाइनलमाथि कहिल्यै पुगेको छैन र २०१८ को विश्वकपमा त छनोट नै भएन । अमेरिकी महिला फुटबल टिमले भने निरन्तर सफलता हात पारिरहेको छ । उसको महिला टिमले तीनपल्ट विश्वकप र चारपल्ट ओलम्पिक स्वर्ण जितेको छ । सन् २०१५ मा त्यहाँको फुटबल महासंघलाई पुरुष टिमको तुलनामा महिला टिमले २ करोड डलर बढी आम्दानी दिएको थियो । तर, तलबमा भने पुरुष खेलाडीसँग महिलालाई दाँज्ने अवस्था छैन ।एक अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलबाट पुरुष खेलाडीले १३ हजार १ सय ६६ डलर पाउँछ भने महिलाले ४ हजार ९ सय ५० डलर । त्यसैले गत मार्चमा कार्ली लोयड, मेगान रोपिनोन, रेबेका साउरब्रन, होप सोलो, एलेक्स मोर्गानजस्ता स्टारसहित २८ खेलाडीले विश्वकपमा छनोट नभएको पुरुष टिमका खेलाडीलाई भन्दा थोरै तलब दिएको भन्दै रोजगारसम्बन्धी आयोगमा उजुरी दिएका थिए । त्यसको सुनुवाइ अहिलेसम्म भएको छैन । असमान तलबकै विरोधमा केही स्टार खेलाडीले यो विश्वकपपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइटहाउसमा निमन्त्रणा गरे पनि नजाने घोषणा गरिसकेका छन् ।
बेलायतको महिला सुपरलिगका अधिकांश खेलाडीले वार्षिक १८ हजार पाउन्डभन्दा थोरै पाउँछन् । प्रिमियर लिगका खेलाडीको औसत तलब २६ लाख पाउन्ड छ । युरोपेली क्ल्बमा खेल्ने महिला खेलाडीले मासिक १–२ हजार युरो कमाइरहेका छन् । प्रतिखेल भत्ता १–२ सय डलर दिइन्छ । पुरुष फुटबलको तुलनामा यो दयनीय अवस्था नै हो । अरू देशमा जस्तो इंग्ल्यान्डमा असमान तलबको त्यति चर्को विरोध भएको छैन । अरू देशमा भने खेल नै बहिष्कार गर्नेसम्म भयो ।डेनमार्कको महिला टिमले त थोरै तलब दिएको विरोधमा नेदरल्यान्ड्सविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल नै बहिष्कार गर्‍यो । स्विडेनविरुद्ध विश्वकपको छनोट पनि खेलेन । पुरुष टिमले ५ लाख डेनिस क्रोनर दिएर समस्या सुल्झाउने प्रयास गर्‍यो । तर, महिला फुटबल विकासमा लगानी गर्ने र ठूला प्रतियोगितामा छनोट हुँदा महिला खेलाडीको ६० प्रतिशत तलब बढाउने सहमतिपछि मात्रै समस्या समाधान भयो ।
अस्ट्रेलिया महिला टिमको भत्ता प्रतिखेल ५ सय थियो भने पुरुषको ७ हजार ५ सय डलर । चर्को विरोधपछि त्यहाँको लिगमा ३३ प्रतिशत तलब बढाइएको एक महिना पनि बितेको छैन । राष्ट्रिय टिमका खेलाडीको पनि पहिलो श्रेणीको ४१ हजार, दोस्रो श्रेणीको ३० हजार अस्ट्रेलियन डलर बनाइएको छ । बेग्लै भत्ता पनि पाउनेछ । पहिलाभन्दा दोब्बर वृद्धि भएको हो ।
अफ्रिकी च्याम्पियन भएलगत्तै नाइजेरियाली महिला टिमले असमान तलबलाई लिएर गत वर्ष होटलमै विरोध जनाएको थियो । न्युजिल्यान्डमा भने पुरुषसमान महिला खेलाडीलाई पनि तलब र पुरस्कार दिइएको छ । नर्वे महिला र पुरुष खेलाडीलाई बराबरी तलब दिने पहिलो देश हो, यसले सन् २०१७ अक्टोबरमा समान तलबको घोषणा गरेको थियो । नेदरल्यान्ड्सले पनि दुईदेखि चार वर्षभित्र समान तलब बनाउने जनाएको छ । ग्लोबल फुटबल इम्प्लोयमेन्ट रिपोर्टका अनुसार ३ हजार ६ सय व्यावसायिक महिला फुटबलरको मासिक तलब औसत ६ सय डलर मात्र रहेको छ । त्यसमध्ये आधा खेलाडीले त तलब नै नपाएको बताएका छन् । महिला फुटबलको लोकप्रियता भने बढिरहेको छ । फ्रान्समा भइरहेको आठौं विश्वकपको ७ लाख २० हजार टिकट तुरुन्तै बिक्री भएको थियो ।नेपालमा राष्ट्रिय टिमका महिला खेलाडीले मासिक १० हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् भने पुरुषले १५ हजार । पुरुषको लिग विजेताले ५० लाखदेखि १ करोडसम्म थाप्दा महिलाको च्याम्पियनले ५ लाख मात्र हात पारेको छ ।
फिफाले सन् २०१५ देखि २०१८ को चक्रमा १ अर्ब ८ करोड ५० लाख डलर कमाएको थियो । उसले गत वर्ष महिला फुटबलको प्रवर्द्धनमा २ करोड ८० लाख डलर मात्र खर्च गर्‍यो । उसले आउने तीन वर्षमा ४० देखि ५० करोड डलर महिला फुटबलमा खर्च गर्ने योजना ल्याएको छ । फिफाका हरेक सदस्याले महिला फुटबलमा आफ्नो बजेटको १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, यसलाई धेरैले लत्याइरहेको अवस्था छ । फिफाले महिला फुटबललाई बेवास्ता गरेको आरोप छ । त्यसैले उसले यसापलि महिला विश्वकपको फाइनललाई कोपा अमेरिका र कन्काकाफ गोल्डकपको अन्तिम खेलसँग जुधाएको बताइन्छ ।
छोप्‍न खोजेका विषय उघारिँदै गए
मुस्कुराउनुस्, तपाईं सीसीटीभीको निगरानीमा हुनुहुन्छ !
स्वर्गीय पिताजीका नाममा
अङ्ग्रेजीमा कविता अनुवादको मोह
चिनिमा : ज्ञानकी आदिम नेतृ